Seagate SeaTools Review (fitaovana fitsapana maimaim-poana HD)
Fanaraha-maso tanteraka ny SeaTools Seagate, fitaovana fitsapana maimaim-poana
Seagate dia mamorona programa maimaim-poana maimaim-poana fiara maimaim-poana - SeaTools for DOS sy SeaTools for Windows . Raha samy tsara ireo fitaovana fitsapana, dia hafa izy ireo.
Ny SeaTools ho an'ny DOS dia mahery kokoa saingy sarotra kokoa ny mampiasa. Ny SeaTools for Windows dia tsy aseho tanteraka fa sarotra kokoa ny mametraka.
Samy maimaim-poana avokoa ireo programa roa ireo ary soratana mafy. Raha miahiahy ianao fa mety ho diso ny fiatrehanao mafy, dia iray na roa amin'ireo fitaovana avy amin'ny Seagate no hanampy anao hamantatra izay tsy mety.
Zava-dehibe: Azonao atao ny manolo ny fiara mafy raha tsy mahomby ny fitsapana anao.
Download SeaTools (ho an'ny DOS na Windows)
[ Seagate.com | Tadiavo ny solonanarana
Fanamarihana: Ity fanavaozam-baovao ity dia ny SeaTools for DOS v2.23 sy SeaTools for Windows v1.4.0.6. Azafady mba ampahafantaro ahy raha misy ny dikan-baovao mila averiko.
More about SeaTools Seagate
Seagate SeaTools dia misy amin'ny dikan-teny Windows sy ny endri-dàlana iray, azo alaina maimaim-poana ho an'ny flexibility, antsoina hoe SeaTools for Windows sy SeaTools ho an'ny DOS .
Ny windows 8 , Windows 7 , Windows Vista , ary Windows XP dia samy manohana rafitra fiasa ao amin'ny Windows version ary ny SeaTools for DOS dia azo ampiasaina na inona na inona rafitra miasa ao anatin'ny fiara mafy, na dia tsy misy aza.
Nampiasa Seagate SeaTools ihany koa aho tao amin'ny Windows 10 , ary na dia tsy nanohana ara-dalàna aza izy io dia toa niasa ho dokambarotra.
Araka ny nolazaiko etsy ambony, SeaTools for Windows dia mametraka ny solosainao toy ny programa mahazatra. Afaka manao fitsapana maro samihafa izay afaka manampy amin'ny famaritana ny fahasalaman'ny fiara mafy orina, ary ny karazam-pifandraisana rehetra dia azo atao, toy ny SCSI , PATA , ary SATA .
Ny rindrambaiko ivelany koa dia tohanana toy ireo izay miasa amin'ny USB na FireWire .
Hanombohana, tsidiho ny pejy Download SeaTools ary misafidy rohy antsoina hoe SeaTools for Windows eo ambanin'ny fizarana Downloads . Ny fampiakarana dia rakitra EXE antsoina hoe SeaToolsforWindowsSetup.exe .
Ny fametrahana ny rafitra dia tsy misafotofoto mihitsy, ary manamboatra haingana ny fandaharana.
SeaTools ho an'ny DOS
Aza avela hampahatahotra anao ny ampahany amin'ny DOS - SeaTools ho an'ny DOS dia miasa amin'ny karazana PC, na inona na inona rafitra miasa.
Tsidiho ny pejy Download SeaTools mba hahitana ny SeaTools ho an'ny rindrambaiko download DOS amin'ny faritra Downloads . Hamoaka ny rakitra ISO antsoina hoe SeaToolsDOS223ALL.ISO .
Jereo ny fomba famoahana ny ISO Image File amin'ny CD na DVD tutorial raha tsy nodorana mihitsy ny sary ISO teo aloha (hafa noho ny fandoroana horonan-tsarimihetsika an-tserasera), ary avy eo ahoana no miala avy amin'ny CD na DVD ho fanampiana an'i SeaTools ho an'ny DOS mandeha.
Indrisy fa tsy afaka nahazo ny SeaTools ho an'ny DOS miasa tsara amin'ny drive USB.
Seagate SeaTools Pros & amp; maharatsy ny mifampiresaka
Tsy dia tiako ny tsy mankafy an'io fitaovana tena tsara amin'ny fitaovana fitsapana mafy io:
Misy dikan-teny roa mifanaraka amin'ny zavatra ilaina
Ireo dikan-teny roa ireo dia mora ampiasaina rehefa tafapetraka, ary afaka tanteraka
Ny SeaTools for Windows dia manandrana fifehezana mafy na inona na inona ilay mpanamboatra
Ny SeaTools for Windows dia ahitana fampahalalana marobe momba ny fiara, toy ny laharana serial , ny fahafaha-manao, ny habe, ny cache, ny fikirakirana firmware , ary ny rotation
SeaTools ho an'ny DOS dia ahitana "test de acoustique" tena ilaina ho an'ny fanodikodinam-peo
SeaTools ho an'ny DOS dia OS mahaleo tena, noho izany dia azo ekena miaraka amin'ny rafitra rehetra miasa
SeaTools ho an'ny DOS dia mitaky rindrambaiko software ISO mpamorona izay mety ho sarotra amin'ny mpampiasa
SeaTools ho an'ny DOS dia mitarika fahadisoana 100 fara-fahakeliny, ary ny teboka indray dia tsy maintsy manomboka indray
Ny SeaTools ho an'ny DOS dia toa tsy mahomby amin'ny ankamaroan'ny controller RAID
Ny hevitro amin'ny Seagate SeaTools
Ny fandaharam-pizaran-tseraseran'ny Seagate's SeaTools dia ny sasany amin'ireo mora indrindra ampiasaina ny zavatra niasako hatramin'izay. Ny fitsapana dia fototra, mora mihazakazaka, ary amin'ny ankapobeny dia haingana be amin'ny traikefako.
Ny havanana sy ny fitsapana maimaim-poana dia mora hita rehefa manokatra ny fandaharana ary afaka manomboka amin'ny tsindry vitsy monja amin'ny totozy.
SeaTools ho an'ny DOS dia afaka manatanteraka ireo fanandramana fototra marobe izay azon'ny SeaTools for Windows atao, saingy afaka manao ihany koa ny Acoustic Test tena ilaina (amin'ny Seagate sy Maxtor ihany). Ity fitsapana ity dia afaka mamonjy anao betsaka tokoa raha mieritreritra ianao fa mampiaka-peo ny fiatrehanao mafy. Hivelatra ilay fiara mandrapaha-masiaka tanteraka izany, ka mahatonga ny fiara tsy ho tony. Raha tsy nandre ny tabataba hafahafa intsony ianao, ilay fiara mafy dia ilay meloka!
Noho izany raha toa ianao ka mampifandanja ny sary ISO ary te hanamboatra fitaovana kely mahery kokoa, ampiasao SeaTools ho an'ny DOS. Raha toa ianao ka mpandrefy vaovao kokoa na te-hanao fitsapana haingana sy mandeha ho azy dia omeo ny SeaTools for Windows hanandrana.
13 Gadgets Windows 7 ho an'ny Fanaraha-maso ny System
Inona avy ireo karazana olana ateraky ny ordinateran'ny ordinatera?
Business Card Software ho an'i Windows
Inona no azo antoka?
IMovie 10 - Manomboha Video Manitsy!
Mamoròna Fandefasana App ho an'ny Outlook.com IMAP, POP Access
Fluance XL Series 5.1 Review of Home Theater Speaker System Review
Mianara manakana ny adiresy mailaka ao amin'ny Mac OS X Mail
Ny 8 Best Kodak Cameras mba hividy amin'ny 2017
Ahoana no hizarana amin'ny Excel amin'ny QUOTIENT Function
Inona no dikan'ny CTFU sy ny dikany?
Inona no atao hoe AVC?
Izaho ihany no nahazo iPod - ankehitriny inona?
Ampiasao ny mailaka imailaka mba handinihina ny lahatsoratra ho an'ny fitehirizana mora
Fantaro ny votoatiny manontolo ao amin'ny Nintendo 3DS
Mianara momba ny fitoviana eo amin'ny famoronana sy ny famoahana
Ahoana ny fomba fampiasana masinina fitaratra amin'ny GIMP
Inona ny Xbox Live Silver?
Ahoana no fomba hiomanana ny solosaina ho an'ny famoahana sarimihetsika
Instagram izao dia mampiasa ny fomba fijerin'ny horonantsary